Wakiilka Cusub ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo si Rasmi ah ula Wareegey Xafiiska Howgalka Cusub ee UNSOM
Wakiilka Cusub ee qaramada Midoobay Wakiilka uga noqonaya Soomaaliya Nichloas Kay ayaa manta soo gaaray Magaalada Muqdisho isagoona isla manta shaqadiisa ka bilaabay Xafiiska UNSOM ee Soomaaliya.Ambashador Kay oo isla markii uu soo degey waxaa uu ka qayb galay Munaasibad lagu soo dhaweynayay oo ka dhacday Magaalada Muqdisho ayaa Khudbad ka jeediyay Munaasibaddii soo dhaweyntiisa.
Ugu horeynba Danjiraha ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay hawshan uu Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u Irkaday loona Magacabay Xafiiska UNSOM ee Soomaaliya.Dajire Nicholas ayaa u Mahadceliyay Xafiiskii Siyaasadda ee uu Hurmuudka ka ahaa Danjire Mahiga mudadii uu Hawsha Siyaasadda Soomaalida soo hayay.
Wakiilka cusub ee maanta la wareegey Xafiiskaas ayaa balan qaaday in Mudada Sanadka ah ee uu Xafiiskaasi Xilkisa sii haynayo uu ka shaqayn doono sidii loo taageeri lahaa Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.Danjire Nicholas ayaa balan qaaday in ay taagero buuxda u fidin doonaan Barnaamijyada Dib u Dhsika iyo Dib u Heshiisiinta Soomaaliya isagoona ka codsaday Shaqaalaha Xafiiskaas in ay ku gacan siiyaan Shaqadiisa.
Nicholas ayaa tilmaamay Xiriirka kala dhaxeeya Xukumaddiisa Soomaaliya kaasoo ahaa mid muddo dheer soo jiitamayay isagoona mar kale muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in Xafiiska UNSOM uu maanta wakiil uga noqdo Qaramada Midoobay.
Waxaa isaguna munaasibaddaas ka hadlay Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmooge oo halkaas ku soo dhaweeyay Wakiilka Qaramada Midoobay ay u soo magacawday Xafiiska UNSOM isagoona ballan qaaday in ay la shaqayn doonaan isla markaana ku gacan siinayaan Gudashada Waajibaadkiisa.
Si kastaba Nicholas ayaa waxa uu xilkaas kala wareegayaa Wakiilkii hore ee UNPOS Ambashador Mahiga oo isagu Maanta uu xilkaasi u dhamaaday kaasoo in mudda ah wWakiil uga ahaa Qaramada Midoobay Soomaaliya, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu la Kulmi Doono Madaxda ugu sareysa Dalka
War-Saxaafadeedkii ka soo Baxay Xafiisks UNSOM
Markuu yimid, SRSG Kay wuxuu yiri “Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imaado magaalada Muqdisho iyo inaan helo fursad aan ku taageero Dowladda Federaalka iyo dadka Soomaaliyeed si nabad, amni iyo barwaaqo dib loogu soo dabbaalo Soomaaliya.”
“Soomaaliya waa dal sharaf weyn lehna taariikh qotodheer, lehna dhaqan nool iyo qiyam adag. Marnaba ma illaabi doono arrintan aan soo sheegay intaan ku jiro taageeridda Dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo nabad u ooman.”
“Arrintan waxay Soomaaliya u tahay fursad taariikhi. Dadka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay wax weyn fishaan. Markaa annagana waa inaan han weyn lahaanaa. Waxaan ku hanweynahay oo aan rajaynaynaa in doorasho la qabto sannadka 2016. Caqabadaha na horyaalla aad bay u badanyihiin laakiin waa inaan aad u shaqeynaa si aan fursadda uga faa’ideysano.”
“Maalmaha soo socda waxaan la kulmi doonaa Mudane Madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud iyo Dowladdiisa, waxaa kaloon la kulmi doonaa madaxda AMISOM iyo
IGAD iyo saaxiibada kale ee fara badan oo hawlan taageerada waddanka, gaar ahaan bulshada rayidka Soomaaliyeed.”
“Waxaan daneynayaa inaan xiriir adag la sameysto dhammaan dadka ka shaqeynaya maslaxada Dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. Marka ugu horeysa, shaqaalaheena waxay saldhig ka dhigan doonaan magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Garoowe iyo Baydhabo, waxaana ka go’an inay la shaqeeyaan dhigooda ee Soomaaliya.”
“Dadka Soomaaliyeed waxay Qaramada Midoobaay weydiisteen wadashaqyen cusub oo waafaqsan rabitaankooda. Wax qabadka Qaramada Midoobaay wuxuu noqon doonaa mid aad u midaysan loona wada dhanyahay, lehna waxtar dheeraad ah – kuna saleysan mabadi’da wada shaqeynta dhabta ah ee Ururka Midowga Afrika iyo saaxiibada Soomaaliya ee kale. Bulshada caalamku waxay aqoonsatay arrintan iyadoo u soo mareysa taageerada ay u fidinayso UNSOM.”
Ergeyga Qaramada Midoobay wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “Aniga shakhsi ahaan, waxaan si aad ah u aaminsanahay hawlgalkan, waxaana ku hanweynahay hawsha bilaha soo socda.”
UNSOM waa xafiis cusub oo ah hawlgal siyaasadeed ee Qaramada Midoobaay, oo hawshiisa billaabay maanta. Waxaana xilkiisa ka mid ah inuu taageero dhismaha qaranka iyo nabadeynta, wuxuuna xoogga saaraya dowlad wanaagga, dibuhabeyn hay’adaha amniga, sharciga iyo kala dambeynta, xuquuqda aadanaha, dhexdhexaadinta, dibuheshiisiin siyaasadeed iyo isuduwidda kaalmada caalamiga.
Md. Kay wuxuu horey u ahaan jiray Agaasimaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortoyada Ingiriska, jagadaasoo uu hayey ilaa iyo sannadkii 2012. Jagadan ka hor wuxuu safiir ka ahaa Jamhuuriyada Dimuqraadiga ee Kongo sannadihii 2007-2010 iyo Suudaan sannadihii 2010-2012. Wuxuu kaloo ahaa isuduwaha arimaha Koonfurta Afghanistan ee Dowlada Ingiriiska, iyo madaxa kooxda dibudhiska Gobalka Heldmand sannadihii 2006-2007.
Billowgii shaqadiisi ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Md. Kay wuxuu ka soo shaqeeyey jagooyin la xiriira siyaasadda iyo waddamada. Sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay waddamada Spain iyo Cuba.